Faah faahin qaraxyadi xalay ee Muqdisho. – Hornafrik Media Network
Faah faahin qaraxyadi xalay ee Muqdisho.
By HornAfrik	 On Feb 24, 2018
Muqdisho-Malinle-Waxaa ay wali faah faahino dheeraad ah kasoo baxayaan weeraradi qaraxyada ahaa ee xalay ka dhacay magaalada Muqdisho.
Ilaa sadex qarax ayaa xalayto dhacday oo labo kamid ahi ay ahaayeen kuwo loo adeegsaday gaadiid laga soo buuxiyay aaladaha qarxa halka mid ka kalena uu ahaa nuuca bambaano ee gacmaha laga tuuro.
Qaraxa hore oo loo adegsaday gaari ayaa ka dhacay Meel u dhaw Km0 ex baar fiyaat halkaas oo ay dad badan ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawac meen ,qaraxa labaad ayaa ka dhacay agagaarka Taalada Dhagaxtur waxaana halkaasi ku qarxay gaari ay ciidamada dowlada qaraxa kahor dareemeen inuu sido qarax iyo dagaalamayaal shabaab ah.
Halka qaraxa sadexaad uu ka dhacay xaafada baar u bax oo fariisin ciidamada dowlada halkaasi ku leeyihiin lagu tuuray bam gacmeed
Qasaaraha ka dhashay qaraxyadaasi iyo sidoo kale rasaas ay isku adeegsadeen Rag hubeysnaa oo shabaab ah iyo ciidama dowlada ayaa waxaa ku geeriyooday dad kor u dhaafaya 30 qof halka dhaawacuna uu yahay ku dhawaad 20 oo qaarkood dhaawacoodu halis yahay.
Wasiirka Amniga Xukuumada Somalia Maxamed Abukar Ducaale Islow oo ka hadlay qaraxyadi xalay maqribki ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxaa uu sheegay in ciidanka Amaanka Somalia aya dileen Rag hubeysnaa oo shabaab ka tirsan kuwaas oo weerarka qeyb ka ahaa waxaaa uu wasiirku tilmaamay in shacabka ka dalbanayaan in ay la wadagaan xogaha ku aadan falalka amniga lidka ku ah.
Xaalada guud ee magaalada muqdisho ayaa saakay ah mid degan marka loo eego sida ay xalayto ahayd waxaana qaraxyada nuucaan ah ah Muqdisho ka Nabdooneyd ran iyo October Sanadki Hore.
Deg Deg Qaraxyo is xig xigay oo caawa ka dhacay Muqdisho iyo Cabsi jirta.
Howlgal Al-shabaab hub looga furtay oo ay Ciidanka Xooga Dalka Ka Sameeyeen Gedo.